၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားက ဘယ်သူများလဲ
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားများ
5 Jun 2018 . 5:16 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းက နည်းပြတွေဟာ အပြီးသတ်ကစားသမား (၂၃)ဦးစာရင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ဖီဖာထံ စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ပါပြီ။ အသက်(၁၉)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ လီဗာပူးလ်လူငယ်နောက်ခံလူ အာနိုးလ် Arnold ဟာ အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် သူက အသက်အငယ်ဆုံး ကစားသမားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ကစားသမားက ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား နာမည် မဟုတ်ပါဘူး။ သူက A-လိဂ်ကလပ် မဲလ်ဘုန်းဗစ်ထရီအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ သြစတြေးလျလက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဒန်နီယဲလ်အာဇာနီ Daniel Arzani ပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ချက် အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစွမ်းပွဲမှာ သြစတြေးလျအသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ အာဇာနီဟာ ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၄ မှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့အသက်က (၁၉နှစ်)၊ (၁၅၂)ရက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒုတိယအသက်အငယ်ဆုံးက ပြင်သစ်အသင်း လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ဘာပေ Mbappe ပါ။
ဘာပေရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်က ၁၉၉၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ဖြစ်ပြီး အာဇာနီထက် (၁၅)ရက်ပဲ အသက်ကြီးပါတယ်။ တတိယမြောက် အသက်အငယ်ဆုံး ကစား သမားက ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ မော်ရိုကိုလူငယ်ကြယ်ပွင့်နောက်ခံလူ ဟာကီမီ Hakimi ဖြစ်ပြီး သူ့နောက်မှာ နိုက်ဂျီးရီးယား လူငယ်ဂိုးသမား အူဇိုဟို Uzoho ၊ အင်္ဂလန်အသင်းနောက်ခံလူ အာနိုးလ် Arnold တို့ အသီးသီးရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကစပြီး အသင်းတိုင်းဟာ အနည်းဆုံး အသက်(၁၉)နှစ်အောက် ကစားသမားတစ်ဦးစီ ရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့် အခုပြိုင်ပွဲမှာတော့ အသက် (၁၉)နှစ်အောက် ကစားသမားတစ်ဦးမှ ပါဝင်ခြင်း မရှိတာပါပဲ။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမား(၁၀)ဦး
ဒန်နီယဲလ်အာဇာနီ- 19 နှစ်-04.01.1999- Australia
ဘာပေ- 19 နှစ်-20.12.1998- France
ဟာကီမီ- 19 နှစ်- 04.11.1998- Morocco
အူဇိုဟို- 19 နှစ်- 28.10.1998- Nigeria
အာနိုးလ်- 19 နှစ်- 07.10.1998- England
မူဆာဝါဂူး- 19 နှစ်- 04.10.1998- Senegal
ဟိုဆေးလူးဝစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ်- 19 နှစ်- 19.06.1998- Panama
အီယန်စမစ် -20 နှစ်- 06.03.1998 – Costa Rica
အစ္စမိုင်လာဆား -20 နှစ်- 25.02.1998 -Senegal
လီဆောင်ဝူး-20 နှစ်- 06.01.1998 -South Korea
Photo: The Independent,WorldFootball
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ အသကျအငယျဆုံးကစားသမားမြား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအတှကျ ပွိုငျပှဲဝငျအသငျးက နညျးပွတှဟော အပွီးသတျကစားသမား (၂၃)ဦးစာရငျးကို ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျလာနကေ့ ဖီဖာထံ စာရငျးပေးသှငျးခဲ့ပါပွီ။ အသကျ(၁၉)နှဈသာရှိသေးတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ လီဗာပူးလျလူငယျနောကျခံလူ အာနိုးလျ Arnold ဟာ အသကျအငယျဆုံးကစားသမားစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပမေယျ့ သူက အသကျအငယျဆုံး ကစားသမားတော့ မဟုတျပါဘူး။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အသကျအငယျဆုံး ကစားသမားက ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
အသကျအငယျဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တဲ့သူကတော့ ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား နာမညျ မဟုတျပါဘူး။ သူက A-လိဂျကလပျ မဲလျဘုနျးဗဈထရီအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ သွစတွေးလလြကျရှေးစငျ ကှငျးလယျတိုကျစဈကစားသမား ဒနျနီယဲလျအာဇာနီ Daniel Arzani ပါပဲ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတုနျးက ခကျြ အသငျးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ခွစှေမျးပှဲမှာ သွစတွေးလအြသငျးအတှကျ ပါဝငျကစားခဲ့တဲ့ အာဇာနီဟာ ၁၉၉၉ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီ ၄ မှာ မှေးဖှားခဲ့သူဖွဈပွီး သူ့အသကျက (၁၉နှဈ)၊ (၁၅၂)ရကျပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ဒုတိယအသကျအငယျဆုံးက ပွငျသဈအသငျး လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမား ဘာပေ Mbappe ပါ။
ဘာပရေဲ့ မှေးသက်ကရာဇျက ၁၉၉၈ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ ၂၀ ရကျ ဖွဈပွီး အာဇာနီထကျ (၁၅)ရကျပဲ အသကျကွီးပါတယျ။ တတိယမွောကျ အသကျအငယျဆုံး ကစား သမားက ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ မျောရိုကိုလူငယျကွယျပှငျ့နောကျခံလူ ဟာကီမီ Hakimi ဖွဈပွီး သူ့နောကျမှာ နိုကျဂြီးရီးယား လူငယျဂိုးသမား အူဇိုဟို Uzoho ၊ အင်ျဂလနျအသငျးနောကျခံလူ အာနိုးလျ Arnold တို့ အသီးသီးရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ထူးခွားခကျြကတော့ ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကစပွီး အသငျးတိုငျးဟာ အနညျးဆုံး အသကျ(၁၉)နှဈအောကျ ကစားသမားတဈဦးစီ ရှေးခယျြခဲ့ပမေယျ့ အခုပွိုငျပှဲမှာတော့ အသကျ (၁၉)နှဈအောကျ ကစားသမားတဈဦးမှ ပါဝငျခွငျး မရှိတာပါပဲ။
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အသကျအငယျဆုံးကစားသမား(၁၀)ဦး
ဒနျနီယဲလျအာဇာနီ- 19 နှဈ-04.01.1999- Australia
ဘာပေ- 19 နှဈ-20.12.1998- France
ဟာကီမီ- 19 နှဈ- 04.11.1998- Morocco
အူဇိုဟို- 19 နှဈ- 28.10.1998- Nigeria
အာနိုးလျ- 19 နှဈ- 07.10.1998- England
မူဆာဝါဂူး- 19 နှဈ- 04.10.1998- Senegal
ဟိုဆေးလူးဝဈရိုဒရီဂှကျဇျ- 19 နှဈ- 19.06.1998- Panama
အီယနျစမဈ -20 နှဈ- 06.03.1998 – Costa Rica
အစ်စမိုငျလာဆား -20 နှဈ- 25.02.1998 -Senegal
လီဆောငျဝူး-20 နှဈ- 06.01.1998 -South Korea